> Resource > Windows > Dr. DivX Alternative for Windows: qaabab More, sida dhaqsaha badan Video Converter
Dr. DivX waa doorasho caan ah oo qof walba oo isku dayaya in ay abuuraan videos qaab DivX ah. Waxaa jira ka biyodiiday cad halkan, si kastaba ha ahaatee. Inkastoo, way weyn tahay markii aad rabto in aad qaab DivX ee aad videos, sidee ka badan ayay samayn kartaa. Waa xadidan, taas oo macneheedu yahay in aad leedahay si aad u hesho lahaa barnaamijyo dheeraad ah oo noocyo kale file iyo muuqaalada. Helitaanka iyo ku rakibidda a kale Dr. DivX for Windows waa ikhtiyaarkaaga ugu fiican marka la isku dayayo in la sameeyo videos badan intii suurto gal.
Wondershare Video Converter Ultimate ( version Mac la heli karo) waa doorasho hogaanka u converters video oo kale ah in Dr. DivX for Windows. Waa wax ku ool ah, lagu kalsoonaan karo, oo waxaa ka buuxda muuqaalada in aad u baahan tahay. Waa wax aad u sii wadi kartaa in ay isticmaalaan u tiro badan oo ah baahiyaha maamulka video.
Waa maxay Dr. DivX Alternative for Windows fiican
Sida loo rogo ama la Alternative si ay Dr. DivX for Windows
1. Speed ​​Conversion fiican
Marka aad diinta aad videos, ma yeelan doonaan inaad sugto qiyaastii muddo dheer. Halkan xawaaraha Wareejinta waa horumar badan wax kasta oo ay tahay in aad isku dayay ee la soo dhaafay. Waxaad noqon doontaa si loogu badalo files in xawaare in aad sheegi karin ama aan ku riyooday iyadoo marka la isticmaalayo converters kale oo badan waxaa ay awoodaan. Tani waxay ka dhigi kartaa qolka beddelaad dheeraad ah oo ku siin kara in ka badan oo aad maalin dib guud ahaan.
2.Massive Video qaabab
Ay u badan tahay in aad dooneyso in aad doorato Wondershare sababtoo ah xaqiiqda ah in aanay sida xadidan sida Dr. DivX yahay. Waxaad halkan kala doorashada badan oo noocyada file, oo ay ku jiraan dhawr fursadood oo labada 3D iyo HD videos. Ka faa'iideysanayo tani waxay kaa caawin doontaa inaad ka badan rafcaanka oo xiiso leh videos in qof kasta Khayrja doonaa.
Iyada oo labada ay qaadan karaa qaabab file badan, waa Wondershare in sii fiican tahay in qaabab wax soo saarka, sida iska cad. Waxaa aan diiradda saaray kaliya hal, sidaa darteed waa ay awoodaan in ay si fiican u sameeyaan shaqo oo dhan.
3. awooda la yaabka leh
Waxaa jira qaabab ka badan laga heli karo in tani ay racfaan ah Dr. DivX duwan oo loogu talagalay Windows sameeyo. Kuwaas waxaa ka mid video tafatirka, dajinta, iyo gubasho, oo ay u fududaato in la xakameeyo oo videos aad leedahay iyo halka ay tagaan. Waxaad iska bixi kartaa videos goobaha sida YouTube ama Facebook cajiib ah si fudud ka dibna waxa aad bilaabi kartaa iyaga diyaarinaya kuwa kale si ay u arkaan. Sameynta taasi ka dhigan tahay sixiddiisa xajmiga iyo watermark ka dibna waxa gubanaya si DVD hal mar aad dhameyso.
Diinta files leh kale si ay Dr. DivX for Windows waa cajiib fudud. Ma aha in aad u dhigay badan oo dadaal galay sababtoo ah waxaa la sameeyey si loogu isticmaalo guud, ma xirfadeed ama khabiir. Waa inaad u jiidi oo hoos u video files galay qaybta gaarka ah, doortaan qaab file ah, ka dibna riix badalo. Waxaa aan wax badan, waxa uu.
Iyadoo tahay si sahlan iyo qurbaan qaababka aad u badan, Wondershare Video Converter Ultimate waa mid lagu beddelan karo in Dr. DivX for Windows in aad ku raaxaysato karaa iyadoo la isticmaalayo. Waxay leedahay wax badan u soo diinta video iyo diyaarinta si walba u muuqataa mid gaar ah oo diyaar u ah inay ku daabacaan.